အမည်မသိစာအုပ်: တဏှာအခံကြောင့် နေရာအမြန်ရပေမယ့်
လက်တစ်ဖက်က ရေဖလားကို ကိုင်ပြီး ရေစည်ထဲတွင်ပြည့်လျှံနေသော ရေများထဲသို့ ထိုးနှစ်ကာ ခပ်လိုက်ပြီး ကိုယ်လုံးပေါ်ကို လောင်းချလိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ ကျမဟာ သူ့ကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူက မြေပြင်ပေါ်မှာ အုံးလက်အလယ်ကြောရိုး အရင်းပိုင်းတစ်ပိုင်းကို ဖင်ခုပြီးထိုင်နေရာက လက်ထဲမှာ ဓားပါးလေးတစ်ချောင်း ကိုင်ထားပြီး အုံးလက်လေးတွေကို တံမြက်စီးတန်သပ်နေရာကနေ ကျမကို ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့် လုပ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ကျမရေချိုးနေတဲ့နေရာနဲ့ သူရှိတဲ့နေရာကြားမှာ ပန်းခြုံလေးများရှိကာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လည်း ပေ(၂၀)နီးပါးလောက် ဝေးလေတော့ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေချိုးနေတဲ့ ကျမက မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူ့ကို သဲသဲကွဲကွဲ မြင်နေရပေမယ့် သူကတော့ ကျမ သူ့ကို တွေ့နေရတယ်ဆိုတာ သိပုံမရပါဘူး။
သူ့ကိုတွေ့လိုက်ရပြီး သူက ကျမကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာလဲ ကျမက သိလိုက်ရရော ကျမဟာ လက်ထဲက ရေခွက်ကို ရေစည်ထဲချလိုက်ပြီး ကျမရဲ့ကိုယ်ပေါ်က ရင်လျားထားတဲ့ ထဘီတပတ်နွမ်းပါးပါးလေးကို အသာဖြန့်ပြီး ခပ်လျှော့လျှော့လေး ပြင်ဝတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ရေဖလားကို ကောက်ကိုင်လိုက်ပြီး ကျမရဲ့ကိုယ်လုံးပေါ်ကို ရေတွေ တ၀ုန်းဝုန်းနဲ့ အမြန်ပဲ လောင်းချိုးလိုက်ပါတယ်။
ကျမရဲ့ တကိုယ်လုံးမှာ ရေတွေ ရွှဲနစ်၍ သွားရပါပြီ။
ဒီအခါမှာတော့ ကျမဟာ လက်ထဲကရေခွက်ကို ချလိုက်ပြန်ပြီး သူရှိတဲ့ဘက်ကို ကျောပေးလိုက်ရာက ကျမဟာကုန်းပြီး ကျမရဲ့ခြေဖမိုးလေးတွေကို ခဏကြာတဲ့အထိ ချေးတွန်းနေလိုက်ပါတယ်။
ခဏမျှကြာသွားတဲ့အခါကျတော့မှ ကျမဟာ ခါးကိုပြန်ဆန့်လိုက်ပြီး သူရှိရာဘက်ကို လှည့်လိုက်ရာက ကျမရဲ့ပေါင်နှစ်လုံးကို ခပ်ကားကား ပြုလုပ်လိုက်ပြီး ကျမရဲ့ကိုယ်ပေါ်က ရင်လျားထားတဲ့ ထဘီအောက်နားစလေးကို ဒူးဆစ်အထိလှန်တင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာတော့ ကျမရဲ့ ဖြူဖွေးပြီးနေတဲ့ ခြေသလုံးသားလေးတွေဟာ ထွက်ပေါ်၍ လာတဲ့အခါမှာတော့ ကျမဟာ အသာငုံ့ပြီး ချေးတွန်းပါတယ်။ တခါ ကျမရဲ့ထဘီအောက်နားစလေးကို ဆက်ပြီးတော့ အပေါ်ကို ပေါင်လယ်လောက်ထိ လှန်တင်လိုက်ပြီး ကျမရဲ့ တုတ်တစ်၍ ဖွေးနေသော ပေါင်လုံးကြီးတွေကို ကျမရဲ့ လက်ဖ၀ါးလေးနဲ့ ချေးတွန်းပေးနေပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်နေရာကနေ ကျမက သူရှိတဲ့ဆီကို မျက်လုံးလေး အသာဝန့်ပြီး အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်တော့ သူက လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ ဓားပါးလေးကိုရော အုံးလက်လေးတွေကိုပါ ချထားပြီး ကျမကို သပ်သပ်ကြီးထိုင်ကြည့်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကျမက သူ့ဘက်ကို ကျမရဲ့ ရေတွေ တကိုယ်လုံးရွှဲစိုနေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို လှည့်ထားရာက မတ်တပ်ရပ်ရက်ကနေ ကျမရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကို အသာကားကာ ထဘီအောက်နားစကိုလဲ ပေါင်လယ်လောက်ထိ လှန်တင်ထားတော့ မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေက ကျမရဲ့ပေါင်ရင်းထိပင်မြင်နေရမလား မပြောတတ်ပါဘူးရှင်။ ပြီးတာနဲ့ ကျမဟာ ရင်လျားထားတဲ့ ထဘီလေးရဲ့ ဂျိုင်းကြား အောက်ဖက်နားမှာညှပ်ထားတဲ့ အထက်ဆင်စလေးကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်ပြီး ထဘီလေးကို အောက်ကို လျှောချလိုက်ပါတယ်။
ကျမရဲ့ ဆူဖြိုးမို့မောက်နေတဲ့ နို့အုံဖွေးဖွေးကြီးတွေဟာ အကုန်လုံးနီးပါးပေါ်ထွက်လာ ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးပေါ်ကာနီးဆဲဆဲလောက်မှာတော့ ထဘီလေးကို ဆက်၍ဆွဲမချတော့ဘဲ ရပ်လိုက်ကာ လက်လေးတစ်ဖက်နဲ့ ထဘီလေးကို ရင်ဘတ်မှာ အသာဖိလို့ ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်က လက်ဖ၀ါးလေးနဲ့ ကျမရဲ့ ရင်ဘတ်ရင်ညွန့်လေးတွေကို ပွတ်ပေး၍ ချေးတွန်းနေပါတယ်။
ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့ ကျမနားကို လူတစ်ယောက် လာရပ်သလိုရှိတာကြောင့် ကျမက ခေါင်းငဲ့ကာကြည့်လိုက်တော့ သူလေ….မောင်တိုးပေါ့ ကျမရဲ့ ဘေးတစောင်းနားလေး ငါးပေကွာတဲ့နေရာကနေ ကျမကို မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ ကြည့်နေတယ်လေ။
ကျမလှဲ့ကြည့်တာာ တွေ့လိုက်ရတော့ သူက….
“ မမ ကျွန်တော့်ကို ခေါ်လိုက်သလားလို့….”
ဆိုပြီး ယောင်ဝါးဝါးနဲ့ မေးလာပါတယ်။ ကျမရဲ့စိတ်ထဲက ဒင်းလေးလည်း မခေပါလားလို့တွေးပြီး မင်းကို မမ ပါးစပ်က ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး မင်း မမနား ရောက်လာအောင် အမူအရာတွေလုပ်ပြပြီး ခေါ်လိုက်တာပါလို့ စိတ်ထဲက ပြောလိုက်ပါတယ်။ နှုတ်ဖျားကတော့ ထွက်မလာပါဘူး။ တကယ် နှုတ်ဖျားက ထွက်လာတာကတော့…..
သူ့ရဲ့အမေးစကားလည်းဆုံးရော ကျမက သူ့ကို ယဲ့ယဲ့လေးတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ပြီး….
“ အေး…လာ…ကျောကုန်းကို ချေးတွန်းပေးစမ်းကွာ….”
လို့ပြောပြီး သူ့ဘက်ကို ကျမရဲ့ ကျောပြင်လေးကို လှည့်ပေးလိုက်ရင်ပဲ မောင်တိုးဟာ ကျမရှိရာကို လှမ်းပြီးတိုးကပ်လာပါတယ်။ ကျမကလည်း ကျမရဲ့ထဘီလေးကို ခါးနားထိ လျှော့ချပေးလိုက်တော့ ကျမရဲ့ဖြူဖွေးညက်ညောကာ ပြည့်တင်းနေတဲ့ ကျောသားလေးတွေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ…သူ့ရဲ့ လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်ဟာ ကျမရဲ့ ကျောပြင်လေးပေါ်သုိ့ ဖိကပ်၍လာကာ ကျမရဲ့ ကျောပြင်လေးမှာ နွေးကနဲ ဖြစ်သွားရတဲ့အချိန်မှာပဲ ကျမရဲ့ရင်ထဲမှာ တော့ အေးကနဲ ဖြစ်သွားရပါတော့တယ်။
သူ့ရဲ့လက်ဖ၀ါးကြမ်းကြမ်းကြီးတွေဟာ ကျမရဲ့ကျောပြင်နုနုလေးပေါ်ဝယ် ချေးတွန်းပေးနေတဲ့ပုံမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကျောပြင်လေးကို အလျားလိုက် စုန်ချီဆန်ချီနဲ့ ဖွဖွလေး တရွရွနဲ့ ပွတ်ပေးလိုက်တော့ ကျမရဲ့တကိုယ်လုံးဟာ ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်းထကာ တကိုယ်လုံးရေ
တွေ ရွှဲနေတဲ့ကြားက ထူထူပူပူဖြစ်၍လာရပါတယ်။
သူ့လက်ဖ၀ါးတွေဟာ ကျမရဲ့ ကျောပြင်လေးပေါ်မှာ ဖွဖွလေးတင်ထားရာကနေ ပွတ်ရင်း သပ်ရင်းနဲ့ တဖြေးဖြေး ဖိကပ်လာပြီး ရွရွလေး ပွတ်နေရာကနေ ခပ်သွက်သွက်လေး ပွတ်ပေးလာပါတယ်။
ပြီးတော့လည်း ကျမရဲ့ကျောပြင်ကို အလျားလိုက် ပွတ်နေရာကနေ ကန့်လန့်ဖြတ် ပွတ်လိုက် ဝေ့ကာဝိုက်ကာဖြင့် ပွတ်လိုက်နဲ့ လုပ်နေရင်းက တချက်တချက်မှာ အပေါ်ဖက်ကိုရောက်လာတဲ့ သူ့ရဲ့လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်က ကျမရဲ့ဖွေးဖွေးလုံးလုံး ပုခုံးလေးနှစ်ဖက်ကို တစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီ ဖြတ်ကနဲ ဖြတ်ကနဲ မချင့်မရဲနှင့် တချက်တချက်လာပြီး ဆုတ်နေပါသေးတယ်။ ဒီမျှတင်မကပဲ အောက်ကို စုန်ဆင်းသွားတဲ့ သူ့ရဲ့ လက်ဖ၀ါးကြမ်းကြမ်း နှစ်ဖက်ဟာ ခါးဆစ်နားရောက်နေတဲ့ ကျမရဲ့ထဘီအနားစလေးကို အောက်ဖက်သို့ တိုက်ချပြီး သူ့လက်ဖ၀ါးတွေက ကျမရဲ့ ခါးဆစ်အောက်ဖက်ကိုပင် ဆင်း၍ ဆင်း၍ ရောက်သွားရပါတယ်။
မောင်တိုးဟာ စိတ်တွေ ကြွလာလို့ မထိန်းနိုင်လို့ပဲလား။ ဒါမှမဟုတ် အတင့်ရဲလာတာလားတော့ မပြောတတ်ပါ။ သူ့ရဲ့လက်ဖ၀ါးတွေက အောက်ဖက်ကို စုန်ဆင်းရင်း လက်တစ်ဖက်က ကျမရဲ့ရေတွေရွှဲနစ်နေတဲ့ ထဘီလေးနဲ့ တသားတည်းကပ်နေတဲ့ ကျမရဲ့ဖင်သားစောင်း အိအိကြီးတစ်ဖက်ကို မထိခလုတ် ထိခလုတ်နဲ့ တို့ထိလိုက်ပါသေးတယ်။ ကျမဖြင့် ရင်ထဲမှာ တလှပ်လှပ်နဲ့ ဇိမ်တွေ့လွန်းတာကြောင့် ကျမရဲ့မျက်လုံးလေးနှစ်လုံးကိုပင် မှိတ်ထားမိပါတယ်။ ဒီလိုနေရင်းကနေ စိတ်တွေဟာ တစထက်တစ ကပြောင်းကပြန်ဖြစ်လာရတာနဲ့အမျှ ကျမဟာ ကျမကိုယ်ကျမပင် မထင်မှတ်မိဘဲ ကျမရဲ့ခါးကို ရှေ့ဖက်သို့ ညွတ်လိုက်ရာက နည်းနည်းလောက် ကုန်းလိုက်မိပြီး ရေတွေရွှဲနစ်နေတဲ့ ထဘီပါးလေးနဲ့ တစ်သားတည်းကပ်နေတဲ့ ကျမရဲ့ဖင်သားအိအိကြီးကို နည်းနည်းနောက်ကို ပစ်ပေးလိုက်မိတဲ့ အချိန်မှာပဲ ကျမရဲ့ရင်ထဲမှာလှိုက်ကနဲ ဖိုသွားရပါတယ်။
ကျမရဲ့ဖင်ကြီးနောက်ကို တိုးလိုက်တော့ သူ့ရဲ့ရှေ့ဖက်နဲ့ ဖိမိမတတ် ထိကပ်သွားရတဲ့အချိန်မှာပဲ သူ့ရဲ့ခပ်တိုတိုဝတ်ထားတဲ့ လုံချည်အောက်က အသဲအသန်ဖြစ်နေတဲ့ လီးချောင်းကြီးကို သွားပြီးတိုက်မိတော့တာပါပဲ။ တဆက်ထဲမှာပဲ ကျမဟာ ကျမရဲ့ဖင်သားလုံးလုံးကြီးတွေကို တစ်ချက် နှစ်ချက် အသာလေး လှုပ်လိုက်ပြီး ကျမရဲ့ဖင်သားတွေနဲ့ သူ့ဟာကြီးကို စမ်းကြည့်နေလိုက်မိပါတယ်။
အို….နဲတာကြီး မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ မာပြီး တောင်နေလိုက်တာလည်း သန်လိုက် မာလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့။ ကျမ ဖင်သားကြီးနဲ့တိုက်မိတာတောင် တန့်ခံနေသေးတယ်။ ကျမရဲ့ယောက်ျား အကိုကြီးစိန်မြင့်ရဲ့လီးနဲ့ကတော့ ကွာလိုက်တာ…..အကိုကြီးက အသက်(၅၀)လောက်ရှိနေလို့လားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ သူသိပ်ပြီး ထန်နေတဲ့ အချိန်မှာတောင် သူ့လီးက ခပ်ငိုက်ငိုက်ရယ်။ ကျမလို အသက်(၂၈)နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ဆူဆူဖြိုးဖြိုးနဲ့လူက ဘယ်အားရကျေနပ်နိုင်မှာလဲ။ ပြီးတော့ ရကာစ တစ်လလောက်ပဲ နောက်တော့ တစ်ပတ်တစ်ချီတောင် မနဲလုပ်နေရသေးတယ်။
ဒါနဲ့တောင် သူက နှာထပြီး တဖက်ရွာက တခုလပ်မတစ်ယောက်နဲ့ ဖြစ်နေသေးတယ်လို့ ကျမ ကြားကြားနေရတယ်။ တွေးနေမိတဲ့ကျမဟာ ကျမရဲ့စောက်ပတ်အောက်နှုတ်ခမ်းစပ်နဲ့ စအိုပေါက်လေးကြားမှာ နင့်ကနဲ ခံစားသွားရတာကြောင့် ကျမရဲ့အသိစိတ်ဟာ မောင်တိုးဆီ ပြန်ပြီးရောက်သွားရပါတယ်။
အလိုရှင်….မောင်တိုးရယ်လေ…..ကျမရဲ့ဖင်သားကြီးတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ တဖက်တချက်ဆီ ဆွဲကိုင်ကာ ဖင်သားအိအိကြီးတွေကို ဖျစ်လိုက်ညစ်လိုက် ဆုတ်နယ်လိုက် လုပ်ပေးနေရုံမကပဲ သူ့ရဲ့ရှေ့က လုံချည်တွင်းကနေ ငေါထွက်နေတဲ့ လီးတန်ကြီးဟာ ကျမရဲ့ဖင်ပေါက်(၂)ခုကြားနယ်လေးကို အမိအရ ဖိထောက်ထားပါတယ်။
သူ့ဆီကို ကျမ အမှတ်တမဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်မိတဲ့ အချိန်မှာပဲ သူ့လီးကြီးထိပ်ဟာ ကျမရဲ့ဖင်သားကြီး နှစ်လုံးကြားကနေ နောက်ကို ဆုတ်သွားတဲ့အတွက် ကျမလည်း ကျမရဲ့မျက်နှာလေးကို ရှေ့ဖက်သို့ ပြန်လှည့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ…..“ အင့်…. ”
မောင်တိုးလေ သူ့လီးတန်ကြီးထိပ်နဲ့ ကျမရဲ့ဖင်သားကြီး နှစ်ခြမ်းကြားကို ခပ်နာနာလေး ဆောင့်သွင်းလိုက်ရာ ရေစိုပြီး တသားထဲကပ်နေတဲ့ ကျမရဲ့ထဘီလေးဟာ ဖင်သားကြီး (၂)ခုကြားမှာ ချိုင့်ဝင်ပြီး ကပ်နေတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့လီးတန်ကြီးထိပ်ဟာ မိမိရရပဲ ကျမရဲ့စအိုဝလေးကို တဲ့တဲ့ထိုးဆောင့်မိပါတော့တယ်။
ကျမဟာ အင့်ကနဲဖြစ်သွားရာက မျက်လုံးလေးတွေ ဖြတ်ကနဲမှေးကျသွားရပြီး တပြိုင်နက်ထဲမှာပင် ကျမရဲ့တကိုယ်လုံးဖြာကနဲဖြစ်သွားရကာ ထဘီစလေးကို လုံးထွေး၍ ရင်ဘတ်တွင်ဖိကပ်ထားသော ကျမရဲ့လက်လေးဟာလည်း ပြုတ်ထွက်သွားရကာ မောင်တိုးက ခပ်နာနာဆောင့်လိုက်တဲ့အတွက် ကျမရဲ့ ခပ်ကုန်းကုန်းလေးဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးဟာ ရှေ့ကိုငိုက်၍သွားရတာကြောင့် ကျမရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ ပေါင်လယ်လောက်သာ အမြင့်ရှိသောရေစည်နှုတ်ခမ်းကို ကျမရဲ့ လက်လေးနှစ်ဖက်နဲ့ ဆန့်တန်း၍ မြဲမြံစွာကိုင်ကာ ထောက်လိုက်မိပါတော့တယ်။ မောင်တိုးကလည်း လျင်လိုက်တာလေ။ ကျမရဲ့ရင်ဘတ်မှာဖိထားတဲ့ ထဘီစလေးဖြတ်ကနဲ လွတ်ထွက်ပြုတ်ကျသွားရတဲ့ အချိန်မှာပဲ သူက ကျမရဲ့ထဘီကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆွဲချကာ ချွတ်လိုက်တော့ ရေစိုနေတဲ့ထဘီလေးဟာ ကျမရဲ့ခြေဖျားဆီကို ကွင်းလုံးလုံးပြီး ကျသွားတဲ့အချိန်မှာပဲ ကျမရဲ့ဖင်သားကြီး(၂)ခုကြားမှာ နွေးကနဲ ဖြစ်သွားရတာကြောင့် သဘာဝအရ အလေ့အကျင့်ရပြီးဖြစ်နေတဲ့ ကျမဟာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ပြင်ရပ်လိုက်ကာ ပေါင်နှစ်လုံးကို နဲနဲဟပေးလိုက်ပြီး ကျမရဲ့ခါးကိုလည်း ပိုပြီးညွတ်ကာ တင်ပါးကြီးတွေပေါ်က ဖင်သားကြီးတွေကို လုံးတစ်၍ မြှောက်ကြွပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီအချိန်မှာပဲ လုံချည်ချွတ်ပြီးသား ဖြစ်နေတဲ့ မောင်တိုးရဲ့လီးတန်ကြီးဟာ ဖင်သားကြီးနှစ်လုံးကြားကနေ နောက်ကိုတစ်ရစ်ပြီး စူထွက်လျက် အရည်ကြည်လေးများပင် တစွန်းတစထွက်နေပြီဖြစ်လေသော ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းဝသို့ ထိပ်ဖူးနွေးနွေးကြီး တေ့၍ထောက်လိုက်ပြီး ဖိ၍သွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။
ကျမရဲ့မျက်နှာလေးဟာ မော့တက်သွားပြီး မျက်လုံးလေးနှစ်လုံးစင်းကျသွားရာမှ မျက်နှာလေးဟာ ခပ်ရှုံ့ရှုံ့လေးဖြစ်သွားရပါတယ်။ ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲကို သူ့လီးတန်ကြီးတ၀က်သာသာလောက် ၀င်သွားအပြီးမှာ ဆက်၍မသွင်းသေးဘဲ ရပ်ထားလိုက်တာကြောင့် ရမက်သွေးတွေ အဆမတန် ထကြွသောင်းကျန်းကာ ဆန္ဒတွေပြင်းပြနေတဲ့ ကျမဟာ…..
ဒီလို ကျမက ကဗျာကသီပြောလိုက်တော့ ကျမရဲ့ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီးနှစ်ဖက်ကို ဆုတ်ကိုင်ထားတဲ့ သူရဲ့လက်ဟာ ပို၍ဖိကပ်လာကာ တင်းကြပ်စွာ ကိုင်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့လီးတန်ကြီးကိုဖိပြီး ထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။
“ ဗြစ်….အိုး…..ဗြစ်….ဖွတ်……အမလေး ”
တအားကို ဖိသွင်းလိုက်တာပဲရှင်။ နှစ်ချက်ထဲနဲ့ တဆုံးဝင်အောင် ဆောင့်သွင်းလိုက်တော့ လင်ရှိပေမယ့် ကလေးမမွေးသေးဘဲ နပ်မှန်အောင်ပင် ခံမထားရတဲ့ ကျမရဲ့စောက်ပတ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးဟာ အောင့်တက်သွားရပါတယ်။ သူ့လီးတန်ကြီးကတော့ ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲမှာ အပြည့်အသိပ် မဆန့်မပြဲဖြင့် တဆုံးဝင်၍သွားခဲ့ရပါပြီ။ နဲနဲနောနောဟာကြီး မဟုတ်ပါ။ စောက်ခေါင်းတစ်ခုလုံး ဖိသိပ်နေတဲ့အပြင် ထိပ်ဖူးကြီးကလည်း ရင်ဝကို ပြေးဆောင့်လိုက်သလိုပဲ မာလိုက်တာလည်း မပြောပါနဲ့။ သံချောင်း တစ်ချောင်းလိုပါပဲ။ ယောက်ျားလီးကြီး စံချိန်မှီမှီနဲ့ ဒီလိုမာတာ ဒီတစ်ခါပဲ တွေ့ဖူးတာပါ။ ပြီးတော့ ဒီလောက်သန်မာလှတဲ့ လီးချောင်းကြီးမျိုး ဒီတစ်ခါပဲ ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲကို သွင်းဖူးတာပါ။
အားရပြီးကျေနပ်လိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့ရှင်။ ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲကလည်း စောက်ရည်ကြည်တွေဟာ ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ ထွက်လာကြပါတော့တယ်။
ဒီကြားထဲမှာ မောင်တိုးက ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲမှာ တဆုံးဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့ လီးတန်ကြီးကို ကျမစောက်ပတ်ဝနဲ့ သူ့လီးတန်အရင်းတို့ ဖိကပ်ပြီး သူ့ခါးကြီးကို လှုပ်ကာ သူ့တင်ပါးကြီးတွေကို လှုပ်ကာမြောက်ကာ လုပ်ပေးနေလေတော့ မောင်တိုးရဲ့လီးတန် မာမာကြောကြောကြီးဟာ ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲမှာ အပြည့်အကြပ်ဖြစ်နေတာတောင်မှ စောက်ခေါင်းနုနုလေးတွေကို ပတ်လည်လှည့်ကာ ဖိကြိတ်ပြီး ပွတ်နေတော့ရာ….
ဟူသော အသံလေးများဖြင့် ကျမရဲ့ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီးတွေဟာ တကုန်းကုန်းနဲ့ မြောက်ကြွ မြောက်ကြွဖြစ်နေရပါတယ်။
“ မောင်တိုး……မင်းဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ….ဟင်း…..အို….အို....ဟင်း…..ဟင်း… ”
ပြောကာမှ မောင်တိုးက ပိုလုပ်လိုက်ပါသေးတယ်။ ကျမရဲ့စောက်ရည်ကြည်တွေဟာလည်း သူ့လီးတန်ကြီး လှုပ်လိုက်တိုင်း စောက်ပတ်ဝကနေ စိမ့်ကနဲ စိမ့်ကနဲ ထွက်လာရကာ…..ကျမရဲ့ ပေါင်တွင်းသားလေးများဆီသို့ပင် စီးကျနေပါပြီ။ ခဏနေတော့မှ မောင်တိုးဟာ သူ့လီးတန်ကြီးကို ရှောကနဲ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ဆတ်ကနဲ ဆောင့်ပြီးသွင်းကာ စပြီးလိုးပါတော့တယ်။
သူ့ဆောင့်ပြီး လိုးလိုက်လေတိုင်း အင့်ကနဲ….အင့်ကနဲ….ဖြစ်ရင်းက ကျမဖြင့် အရသာရှိလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့ရှင်…..။ ကျမ သူ့ကို အထင်သေးမိတာ မှားပြီလားလို့တောင် တွေးမိပါတယ်။ သူ့ဟာ သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ မောင်တိုးကို ကျမက မိန်းမသား သဘာဝအတိုင်း ကိုယ့်ကိုသဘောကျ စေချင်လို့ ဂရုစိုက်စေချင်လို့ လူကလည်း လစ်တာနဲ့ ဒီလောက်ထိ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လည်း မထင်ဘဲ စမိရာမှ ခုတော့…..ကျမဖြင့် ကော့ပျံ၍နေရပါပြီ။
ပြီးတော့ ဒီလောက်ထိ ဖြစ်၊ မဖြစ်ဆိုတာကလည်းကျိန်သေတွက်လို့မရကြောင်းနဲ့ မစီးရင်တော့နေရော တက်စီးလိုက်ရင်တော့ စီးတဲ့သူနောက်ပါသွားတတ်တာ ကျမလို မိန်းကလေးတွေရဲ့ သဘာဝပါပဲလားလို့လည်း တွေးလိုက်မိပါတယ်။ မောင်တိုးကတော့ ဖင်ကုန်းပေးထားတဲ့ ကျမကို နောက်ကနေပြီးတော့ အားရပါးရကို ဆောင့်ပြီး လိုးနေပါပြီ။
အရသာတွေကောင်းသထက် ကောင်းလာရတဲ့ ကျမဟာ သူ့လီးတန်ကြီးက ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲကို ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးလိုက်လေတိုင်း ကျမရဲ့ဖင်ကြီးတွေကို နောက်ပြန်ကော့ကော့ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီလို သူ့လီးတန်ကြီးက ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲကို ဆောင့်ဆောင့်ပြီး သွင်းလိုက်လေတိုင်း ကျမရဲ့ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီးတွေဟာ တဖြတ်ဖြတ်ခါသွားပြီး ကျမရဲ့နောက်ကို စူထွက်နေတဲ့ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးတွေဟာလည်း သူ့ရဲ့လီးတန်ကြီးနဲ့အတူ ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲကို ခွက်ခွက်ပြီး ၀င်သွားနေမှာ အမှန်ပါပဲရှင်။
မောင်တိုးက သူ့ရဲ့လီးတန်ကြီးကို ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲသို့ အားပါးတရ ဆောင့်လိုးပြီး နောက်တကြိမ် ဆောင့်ဖို့အတွက် သူ့လီးတန်ကြီးကို ဆွဲ၍ အထုတ်မှာလည်း ကျမရဲ့စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးနှစ်ခုဟာ သူ့လီးတန်ကြီးနဲ့ ကပ်ညှိပြီး အပြင်ကိုလန်ထွက်လာမှာ အသေအချာပါပဲ။
“ ပြွတ်….ဖွတ်…..ဖွတ်……ပလွတ် ”
သူ့ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေဟာ အလွန်အမင်းပြင်းထန်လာတာနဲ့အတူ မောင်တိုးဟာ အားမလို အားမရနဲ့ သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျမရဲ့ ရှေ့ကနို့အုံကြီးတွေကို လှမ်းဆွဲပြီး မချင့်မရဲနဲ့ ဆုတ်နယ်နေပါသေးတယ်။
« Reply #5 on: October 01, 2012, 10:42:53 PM »
ကျမဖြင့် ကောင်းလွန်းလို့ ဘာမှမသိတော့ပါဘူး။ မောင်တိုးက အားပါးတရ ဆောင့်လိုက်တိုင်း ကျမရဲ့ကုန်းပေးထားတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးဟာ ရှေ့ကို ဆတ်ကနဲ တိုးသွားတာနဲ့အတူ ကျမရဲ့ဦးခေါင်းလေးဟာလည်း နောက်ကို လန်လန်သွားပြီး ကျမဖြင့် တကျွတ်ကျွတ်နဲ့ မချိမဆန့်လေး စုပ်သပ်နေရပါတယ်ရှင်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ မောင်တိုးဟာ အားရပါးရဆောင့်လိုးနေရင်း…..
“ မမ ….အား…..မမ ကို ကျွန်တော်ချစ်သွားပြီ….မမ ရယ်….မမရော….ကျွန်တော့်ကို ချစ်လားဟင်…..”
ကျမလည်း သူ့မေးလာတာကြောင့် အံ့အားသင့်သလိုဖြစ်သွားပြီးဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိအောင်ကို ဖြစ်သွားရပါတယ်….နောက်တော့ ကျမလည်း လိမ်မာပါးနပ်စွာနဲ့….
“ လုပ်မှာသာ…..လုပ်စမ်းပါ….မမလည်း….အား…..မင်း…ကို….ချစ်တာပေါ့….. အင်း….ဟင်း….အား…..”
မကြာခင်မှာပဲ ကျမရဲ့နို့အုံပေါ်က သူရဲ့လက်ရော ကျမရဲ့ဖင်သားကြီးပေါ်က သူ့ရဲ့လက်ရောဟာ ကျမရဲ့ခါးသေးသေးလေးပေါ်ကို ရောက်လာပြီး အတင်းကို ဆွဲညှစ်ကာကိုင်ရင်း မောင်တိုးဟာ သူ့လီးကြီးကို ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲသို့ အသားကုန်ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးလိုက်ပါတယ်။
“ တော်ပြီကွာ….မောင်တိုး…..မမ ကို အဲဒါမျိုးတွေ မမေးနဲ့…….အား…..ဆောင့်…ဆောင့်…..မောင်တိုး….ဆောင့်……အား….ကျွတ်…..မမ ပြီးတော့မယ်……အား…..”
တခဏအတွင်းမှာပဲ ကျမဟာမျက်လုံးနှစ်လုံး စုံမှိတ်ပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြတ်ထွက်လုမတတ် ကိုက်ရင်းလည်ချောင်းသံလေးနဲ့….
ဟု မချိမဆန့်အသံပြုရင်း ကျမရဲ့ကိုယ်လုံးလေးဟာ တဆတ်ဆတ်ဖြစ်ရာက ပျော့ခွေကာ ကျသွားတော့မတတ် ရှေ့သို့အငိုက်မှာတော့ မောင်တိုးက သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကျမရဲ့ခါးကို အတင်းဆွဲကာကိုင်ထားပြီး ခပ်ပြင်းပြင်းကို ဆောင့်လိုးနေပါတယ်။ ကျမလည်း မောင်တိုးပြီးကာနီးပြီဆိုတာ သူ့ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေအရ သိလိုက်ပါတယ်။ တခဏအကြာမှာတော့…..
ဟု ပြောပြောဆိုဆို မောင်တိုးဟာ ကျမရဲ့ဖင်ကြီးတွေကို သူ့ရှေ့သို့ ဆွဲကပ်၍ သူကလည်း ဖိကပ်ထားကာ မောင်တိုးရဲ့ခါးကြီးဟာ တတွန့်တွန့် ဖြစ်သွားရပါတော့တယ်။
ခဏကြာတဲ့အထိ ခါရမ်းနေတဲ့ ကျမရဲ့ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီးတွေကို သူ့ရဲ့လီးတန်ကြီး တဆုံးသွင်းထားရက်ကပင် မောင်တိုးရဲ့ လက်နှစ်ဖက်ဟာ ညင်ညင်သာသာပွတ်၍ပေးကာ ဆုတ်လိုက် နယ်လိုက် လုပ်၍လည်း ပေးနေပါတယ်။ အတန်ငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ မောင်တိုးဟာ ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲက သူ့လီးကြီးကို ဖြေးဖြေးချင်းဆွဲထုတ်လိုက်လို့ လီးတန်
ကြီး တစ်ခုလုံး ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲ ကျမဟာ ခါးဆန့်ပြီး ရပ်လိုက်ရာက ကျမရဲ့ခြေဖျားပေါ်က ရေစိုထဘီလေးကို ခြေဖျားလေးများကြွကာ ဆွဲယူလိုက်ပြီး ခါ၍ နဲနဲဖြန့်လိုက်ကာ ခြေထောက်မှကောက်စွပ်ပြီး ၀တ်လိုက်ကာ ရင်လျားလိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ သူ့ရှေ့က ခြေတလှမ်းလှမ်းကာ လှည့်ထွက်လိုက်ပြီးတော့မှ ကျမဟာ သူရှိရာဖက်သို့ လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အ၀တ်အစားဆိုလို့ တစ်ခုမှ ၀တ်မထားတဲ့ မောင်တိုးဟာ သူ့ရဲ့မာတောင်ဆဲဖြစ်တဲ့ လီးတန်ကြီးဟာ အရည်တွေပေပွပြီး တောက်ပြောင်နေကာ သူက သူ့ရှေ့ကနေ လှည့်ထွက်သွားလုဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့ ကျမကို ခပ်တွေတွေရပ်ကာ ရီဝေေ၀လေးနဲ့ ကြည့်နေပါတယ်။
သူ့ရဲ့အကြည့်တွေထဲမှာ မသွားပါနဲ့လား မမရယ်….လို့ ပြောနေသယောင် အရိပ်အယောင်တွေကို တွေ့လိုက်ရတာကြောင့် ကျမရဲ့ရင်မှာ ညင်သာစွာနဲ့ လှိုက်ဖိုသွားရပါတယ်။
ပြီးတော့ သူ့ရှေ့ကနေ လှည့်ထွက်သွားဖို့ ခြေတစ်ဖက်တောင်လှမ်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ ကျမရဲ့ လက်လေးတစ်ဖက်ဟာ သူ့လက်ကောက်ဝတ်လေးကို လှမ်းပြီး အသာအယာဆွဲကာ ပြီးသည်နှင့် ကျမက လှည့်ထွက်လိုက်လေတော့ မောင်တိုးရဲ့မျက်နှာလေးဟာ ၀င်းပသွားပြီး ချွတ်ထားတဲ့ သူ့လုံချည်ကို ကဗျာကသီ ကောက်ယူကာ မောင်တိုးဟာ ကျမဆွဲခေါ်ရာနောက်သို့ လိုက်ပါခဲ့ပါတော့တယ်။
ကျမကလည်း သူ့လက်ကိုဆွဲရင်း ခေါ်လာရာက နောက်ဖေးတံခါးပေါက်ကတဆင့် အိမ်ထဲသို့ လှမ်းတက်လိုက်ပါတော့တယ်ရှင်……။
ကျမဟာ အိမ်ပေါ်ကို ရောက်တာနဲ့ တခါထဲပဲ သူ့ကို ကျမရဲ့အိပ်ခန်းထဲကို ဆွဲခေါ်သွားပါတော့တယ်။ အိပ်ခန်းနဲ့ တဖြေးဖြေးနီးလာလေလေ ကျမဟာ ကျမရဲ့လက်နဲ့ဆုတ်ကိုင်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့လက်ကို ပိုပြီးဖျစ်ညှစ်ကာ ဆုတ်ကိုင်လာမိပါတယ်။ အိပ်ခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ကျမဟာ သူ့ရဲ့လက်ကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး အိပ်ခန်းတံခါးကို ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ ကျမဟာ အိပ်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ ကျမနဲ့ ကျမယောက်ျားတို့ အိပ်တဲ့ နှစ်ယောက်အိပ် ကုတင်ကြီးနားကို လျှောက်သွားတော့ သူကလည်း တဖ၀ါးမခွာ ကျမရဲ့နောက်ကနေ လိုက်လာပါတယ်။
ကုတင်နားရောက်တော့ ကျမဟာ ကျမရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ ရင်လျားထားတဲ့ထဘီလေးကို ချွတ်၍ ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ မောင်တိုးဟာ သူရဲ့လက်ထဲက ဆွဲကိုင်လာတဲ့ သူ့ရဲ့လုံချည်ကို လွှတ်ချလိုက်ပါတယ်။
အမှန်တော့ မောင်တိုးဟာ ကျမခေါ်ဆောင်ရာနောက်ကို လုံချည်ပင်မ၀တ်အားပဲ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ပင် အရည်တွေ ပေပွနေတဲ့ သူ့ရဲ့လီးတန်ကြီး တရမ်းရမ်းနဲ့ လိုက်ပါလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို မောင်တိုးက သူ့လက်ထဲက လုံချည်ကို လွှတ်ချလိုက်ပြီးတာနဲ့ ဘာမှ အ၀တ်အစားမရှိတော့တဲ့ ကျမရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကို လှမ်းဖက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပင် ကျမကလည်း ကုတင်ကြီးပေါ်ကို လှမ်းပြီး တက်လိုက်သည့်အတွက် သူကလည်း ကျမကို အလိုက်သင့်ဖက်ကာ ကုတင်ပေါ်ကို လိုက်ပါလာပါတော့တယ်။
ပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား အိပ်ယာပေါ်ကို လဲကျသွားကြပြီး….သူ့လက်တဖက်ဟာ ကျမရဲ့ လည်ပင်းအောက်ကနေ လျှိုပြီး ကျမရဲ့ကျောပြင်ကို ပွတ်ပေးလျှက် ကျန်တဖက်ကတော့ ကျမရဲ့ဖင်သားကြီးတွေကို ဖျစ်ညှစ်နေပါတယ်။ တခါတခါ သူ့လက်က ကျမရဲ့ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကို ရွရွလေး ပွတ်လိုက်တော့ ကျမဟာ တတွန့်တွန့်ဖြစ်သွားရပါတယ်။
သူ့နှာခေါင်းကြီးကလည်း အငြိမ်မနေပါဘူး။ ပါးတွေကို နမ်းလိုက်၊ နဖူးကိုနမ်းလိုက်ဖြင့် တစ်ခုပြီးတစ်ခု လျှောက်ပြီး နမ်းနေပါတယ်။ လှုပ်လိုက်တိုင်း လှုပ်လိုက်တိုင်း ရင်ချင်းအပ်လို့ ကပ်နေကြတဲ့ ကျမရဲ့နို့နှစ်လုံးနဲ့ သူ့ရင်ဘတ်ကျယ်ကြီးဟာ ဖြေးဖြေးလေးပွတ်ပေးနေတာ ခံလို့ကောင်းလှပါတယ်ရှင်။ ကျမမှာလည်း အမောနည်းနည်းပြေသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ခါးကြီးကို ဖက်ထားတဲ့ ကျမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကို သူ့လည်ပင်းနဲ့ ကျောပေါ်ပြောင်းတင်လိုက်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခပ်တင်းတင်းဖက်လျက် နှုတ်ခမ်းချင်း တအားဆွဲစုပ်ပစ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။
သူကနည်းနည်းလျှော့လိုက်ရင် ကျမက လိုက်ပြီး တအားထပ်စုပ်ပါတယ်။ နောက်တကြိမ် ကျမရဲ့နှုတ်ခမ်းကို သူကတအား ဆွဲစုပ်ပြီး ကျမရဲ့တင်ပါးကြီးတွေနဲ့ ပေါင်တွင်းသားများကို ဖျစ်ညှစ်လိုက်တာနဲ့ ကျမရဲ့ရင်ထဲမှာ ဖိုကနဲ ဖြစ်သွားပြီး ကျမရဲ့ရာဂစိတ်တွေဟာလည်း တဟုန်ထိုးတက်ကြွလာပါတော့တယ်ရှင်…..။
သူလည်း အသက်ရှုသံတွေ ပြင်းထန်လာပြီး စိတ်တွေပြန်ပြီးထကြွလာပုံရပါတယ်။ ကျမလည်း စိတ်ထလာပြီမို့ မအောင့်နိုင်တော့ဘဲ သူ့ရဲ့ ကိုယ်လုံးကြီးကို ကျမရဲ့ကိုယ်လုံး ပေါ်ရောက်အောင် ဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သူဟာ ကျမရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကို အလိုက်သင့်တက်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့လီးကြီးကို လက်တဖက်က ကိုင်ကာ ကျမရဲ့စောက်ပတ်ဝမှာတေ့ပြီး ထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။
ကျမဟာ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ကျမရဲ့ကားနေတဲ့ ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးကို စေ့ကပ်ထားလိုက်တဲ့အပြင် သူ့လည်ပင်းကို ကျမရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ သိမ်းကြုံးပြီး တအားဖက်တွယ်ထားလိုက်ပါ တော့တယ်။ ကျမက အဲသလိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သူလည်း ပေါင်နှစ်လုံးကို အနည်းငယ်ကားပြီး ခွကာ သူ့ဒူးနှစ်လုံးကို ကျမရဲ့ပေါင်ရင်းဘက်ဘေးမှာ ထောက်ပြီး သူ့တထောင်ဆစ်နှစ်ဖက်ကတော့ ကျမရဲ့ဂျိုင်းနားမှာလာပြီး ထောက်ထားပါတယ်။
သူ့လက်ဖျားလေးတွေနဲ့ ကျမရဲ့နို့နှစ်လုံးပေါ် ရွရွလေးပွတ်ပေးရင်း အောက်ပိုင်းကလည်း သူ့လီးကြီး သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်နဲ့ ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန်ကြီးလုပ်ပေးလျှက်ပါပဲ။
ကျမက ကျမရဲ့ပေါင်နှစ်လုံးကို စေ့ကပ်ထားတာမို့ စောင်ခေါင်းက သူ့လီးကြီးကို ပို၍ဖိညှပ်ထားသလို ဖြစ်ကာ နှစ်ယောက်စလုံးအရသာထူးနေကြပါတယ်။
“ အား…..ဗြစ်….ပြွတ်….အား….အင်း…...ကြပ်နေတာပဲ မမ ရာ…..”
သူက ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်လိုက် ဖြေးဖြေး အရင်းထိအောင်သွင်းပြီး ဖိကပ်မွှေလိုက်တဲ့အခါများမှာဖြင့် သူ့လီးကြီးနဲ့ ကျမအစေ့ကလေးထိလိုက်လို့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့အရသာဟာဖြင့် ကျမရဲ့တကိုယ်လုံးဟာ ဖျတ်ဖျတ်လူးသွားရပါတယ်။
ကျမက ပြီးကာနီးလို့ ကျမရဲ့ပေါင်နှစ်လုံးကို ဖြဲကားပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သူ့ဒူးနှစ်ဖက်ဟာ ကျမရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲကို လာထောက်ပြီး သူ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့ ကျမရဲ့ကားပေးထားတဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကို အထက်သို့ ကိုင်မြှောက်ပြီး သူ့ပခုံးပေါ်ရောက်
အောင်တင်ပြီး ထမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျမရဲ့တင်ပါးကြီးတွေဟာ အထက်ကို
မြောက်ပါလာပြီး ကော့ကနဲပြဲအာနေပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ သူ့လက်ကြီး နှစ်ဖက်နဲ့ ကျမရဲ့နို့ကြီးနှစ်လုံးကို တအားဆုတ်ကိုင်ကာအားယူပြီး သူ့ရဲ့လီးကြီးကို ဆုံး
ကာနီးအထိ ပြန်နှုတ်လိုက်ကာ အားရပါးရဆောင့်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့……
ကျမရဲ့နှုတ်ဖျားက ကျွတ်….ကျွတ်…..ကျွတ်…..ဟုပေါ်ထွက်လာသောအသံ နှင့်အတူ ကျမရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးဟာ ခေါင်းရင်းကို မြောက်တက်သွား၍ ကျမရဲ့တင်ပါးတွေဟာလည်း ခွက်ဝင်သွားတဲ့အထိပါပဲရှင်။
ပထမတစ်ချက်တော့ သားအိမ်ကိုထိပြီး အောင့်သလိုလိုရှိပေမယ့် အဲဒီလို ဆက်တိုက် ဆယ့်လေးငါးခါလောက် ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်လိုးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သူရော ကျမပါ နှစ်ဦးစလုံး ကာမအထွတ်အထိပ်ကို ရောက်လာကြပါတော့တယ်။
“ အား….မမ….အား….အင်း….ချစ်တယ် မမရယ်……”
အချိန်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ ကျမတို့ နှစ်ဦးစလုံး အားရတင်းတိမ်စွာနဲ့ တစ်ချီပြီးမြောက်သွားကြပါတော့တယ်။
သူတော့မပြောတတ်ဘူး။ ကျမမှာဖြင့် တကိုယ်လုံးနုံးချိပြီး မောဟိုက်သွားတော့တာပါပဲ။ သူလည်း သူ့လီးတန်ကြီးကို တအောင့်လောက်စိမ်ထား၍ သူ့ပခုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ကျမရဲ့ပေါင်နှစ်လုံးကို အိပ်ရာပေါ်သုိ့ အသာအယာကလေး ဆန့်တန်းချထားပြီးနောက် ကျမရဲ့နဖူးဆံစပ်ကို ယုယုယယသပ်ပေးကာ နဖူးပြင်လေးကို ကုန်းနမ်း၍ ခြေရင်းတန်းပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို ဆွဲယူလျက် ကျမရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးနှင့် ဆီးစပ်ပါမကျန် ကျမရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ချွေးတွေအားလုံးကို တဖြေးဖြေးလေး သုတ်ပေးနေပါတယ်။
အဲဒီလိုသုတ်ပြီးတာနဲ့ ကျမလည်း သူ့လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ပြီး အအိပ်ခိုင်းလိုက်တော့ သူလည်း ကျမဘေးနားမှာ လှဲ၍နှစ်ယောက်သားဖက်ပြီး မှိန်းနေလိုက်ကြတာ မောမောပန်းပန်းနဲ့ အိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။
ကျမတို့နှစ်ယောက် အိပ်ပျော်သွားလိုက်ကြတာ ကျမနိုးလာတော့ ညနေဖက်မှောင်ရီပင်ပျိုးနေပါပြီ။
ကျမလည်း မောင်တိုးကို ကြည့်လိုက်တော့ ကျမကိုဖက်ရင်း အိပ်ပျော်နေဆဲပါပဲ။ သူလည်း အတော်မောသွားဟန်တူပါတယ်။ တအောင့်လောက်ကြာလို့ သူ့ကိုလှုပ်နိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ နိုးလာ၍ ကျမကို စိုက်ကြည့်နေလို့ ကျမက…..
“ ကဲ….မောင်တိုးရေ…မှောင်ရီတောင်ပျိုးနေပြီ….အကိုကြီးကိုစိန်မြင့်ကမနက်ဖန် ညနေ ပြန်လာမှာဆိုတော့ အချိန်တွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ထပါဦး ရေချိုးပြီး ထမင်းစားလိုက်ကြရအောင်…..”
ကျမက ဒီလိုပြောတော့ သူက ကျမကိုဖက်ထားတဲ့ လက်ကိုဖယ်ပေးလိုက်တော့ ကျမလည်း အိပ်ယာပေါ်ကနေ လူးလဲပြီးထလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကုတင်ပေါ်က လှမ်းဆင်းလိုက်တဲ့ ကျမကို ဆွဲလိုက်ပြီး ကျမရဲ့ ကိုယ်လုံးတီးပေါ်က ကျမရဲ့ အိစက်နေတဲ့ ဖင်သားလုံးလုံးကြီးတွေကို လက်နဲ့လှမ်းပြီး ကိုင်ကာ ဆုတ်နယ်လိုက်ပါသေးတယ်။
ကျမက စောစောက ချွတ်ချထားခဲ့တဲ့ ရေလည်းထဘီလေးကို ကောက်စွပ်ကာ ရင်လျားပြီး ရေချိုးရန် အိမ်ဘေးသို့ ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ကျမ ရေချိုးပြီးရင် လဲဖို့ထဘီကတော့ ညနေပိုင်းက ရေချိုးတဲ့နေရာမှာ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ရွာထဲကို မီးစက်နဲ့မောင်းပြီးပေးတဲ့ မီးကလည်း လာနေပြီဖြစ်လို့ အိမ်ပြတင်းပေါက်ကနေ တဆင့်(၂)ပေမီးချောင်းရောင်ဟာ အိမ်ဘေးကို ထွက်နေတာကြောင့် ကျမရေချိုးရတာ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။
မောင်တိုးဆိုတာက တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ ကျမရဲ့ယောက်ျားကိုစိန်မြင့်ရဲ့တူ ၀မ်းကွဲဖြစ်ပြီး အိမ်မှာဗာရီယလုပ်ဖို့နဲ့ ကူဖော်လောင်ဖက် သဘောမျိုး ကျမတို့နဲ့လာနေတဲ့ ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။
သူက ကျမနဲ့အကိုကြီး ကိုစိန်မြင့်တို့ အိမ်ထောင်မကျမှီထဲက ဒီအိမ်မှာ အကိုကြီး ကိုစိန်မြင့်နဲ့ အတူနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မောင်တိုးက အသက်(၂၀)ရှိပြီဖြစ်ပြီး အလုပ်ကြမ်းသမား ဖြစ်တာကြောင့် နဂိုက လူကောင်ထွားရတဲ့ကြားထဲ ကြွက်သားတွေကပါ အမြောင်းလိုက်ထနေပါတယ်။ ဟင်း….ဟင်း….ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျမ အကြိုက်ပေါ့။
သားသမီးမရှိတဲ့ အသက်(၅၀)အရွယ် မုဆိုးဖို အကိုကြီး ကိုစိန်မြင့်နဲ့ ကျမ မအေးစန်းတို့ အိမ်ထောင်ကျပြီးတာ တစ်နှစ်နီးပါးကြာသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ အားရတင်းတိမ်မှုမရှိခဲ့ရတဲ့ ကျမဟာ ဆန္ဒတွေပြင်းပြလာရတဲ့အခါတိုင်း အတူနေတဲ့ နုပျိုသန်မာတဲ့ မောင်တိုးကို ကြည့်ကြည့်ပြီး ကျမဟာ သာယာနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ခုတော့ အိုးချင်းထား အိုးချင်းထိ ဆိုတာမျိုးလို အိုးချင်းကထိရုံမျှပင်မက အက်သွားမလားမသိပါ။ ကျမရဲ့စောက်ပတ်ဝလေးပင် ရေလောင်းချိုးနေတဲ့အချိန်မှာ စပ်ဖျင်းဖျင်းလေး ဖြစ်လာရပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ရေချိုးရင်း ချိုးရင်းနဲ့ အဲဒီစပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်နေတာလေးဟာ ပျောက်သွားတဲ့အတွက် ကွဲသွားတာမဟုတ်ဘဲ ကျမရဲ့ စောက်ပတ်ဝ ပွန်းသွားတာသာဖြစ်ကြောင်း သေချာသွားတဲ့အတွက် ကျမ စိတ်သက်သာရာရသွားပါ
ကျမရဲ့စိတ်ထဲကလည်း ကျမစောက်ပတ်ဝလေးပင် ပွန်း၍သွားရလောက်အောင် အားကောင်းမောင်းသန်လှတဲ့ မောင်တိုးကို ကြိတ်ပြီးသဘောကျမိလိုက်ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့မှ ကျမဟာ ရှက်ပြုံးလေးပြုံးလိုက်ရင်း ရေချိုးနေတာကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။
ရေချိုးပြီးသွားတော့ ကျမ အိပ်ခန်းထဲပြန်ရောက်တဲ့အထိ မောင်တိုးက ကိုယ်လုံးတီးနဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာ လှဲနေတုန်းပါပဲ။
“ ကဲ…..ကိုယ်တော် ထ ရေချိုး ၊ မမ သနပ်ခါးလိမ်းပြီးရင် ထမင်းစားကြရအောင်…..”
ကျမ ကိုယ့်လင်သားကို ပြောသလို ခပ်ညုညု ခပ်နွဲ့နွဲ့လေးပြောလိုက်ပါတယ်။
တကယ်ကိုလည်း ခုချိန်မှာ ကျမစိတ်ထဲမှာ အဲသလိုကို ခံစားနေရတာပါ။
ကျမပြောလိုက်တော့မှ မောင်တိုးက အိပ်ယာပေါ်မှ လူးလဲထကာ ရေစက် ရေပေါက်လေးများနဲ့ပြည့်တင်းဝင်းဝါနေတဲ့ ကျမရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကို ခဏရပ်ပြီး တပ်မက်စွာနဲ့ကြည့်ပြီးမှ သူက အိပ်ခန်းထဲက ထွက်သွားပါတော့တယ်။
ကျမလည်း ခပ်မြန်မြန်ပဲ သနပ်ခါးရေကျဲလေး လူးလိုက်ပြီး အ၀တ်အစားလဲလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အိပ်ခန်းအပြင်ကိုထွက်ကာ ခုံခင်းပြီး ထမင်းပွဲကို ပြင်ပါတော့တယ်။
ဒီတော့မှ မောင်တိုးက ရေချိုးရာကနေ တက်လာပြီး အိမ်ရှေ့ခန်းဖက်ကို ထွက်သွားပါတယ်။
ခါတိုင်းဆို ထမင်းပွဲပြင်ရတာက ကျမလုပ်ရတာ မဟုတ်ပါ။ ကျမတို့လင်မယားစားဖို့ မောင်တိုးက ထမင်းပွဲ ပြင်ဆင်ပေးရပါတယ်။
ကျမတို့လင်မယား ထမင်းစားပြီးတော့မှ မောင်တိုးက ထမင်းစားရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျမတို့စားပြီးတဲ့ ပန်းကန်တွေကိုပါ သူကစုပြီးဆေးရပါတယ်။
ခုတော့ သူ ထမင်းစားဖို့ ကျမက ထမင်းပွဲပြင်ပေးနေရပါပြီ။ ဒီလိုလုပ်ပေးရတာကိုလည်း ကျမစိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်နေမိပါတယ်။
ထမင်းပွဲပြင်ပြီးတာနဲ့ ကျမဟာ မောင်တိုးရှိရာ အိမ်ရှေ့သို့ထွက်လာတော့ ရေချိုးပြီး ပုဆိုးလဲကာ စွပ်ကျယ်အင်းကျီကိုပါဝတ်ထားတဲ့ မောင်တိုးဟာ ဘယ်တုန်းကမှ မဖီးတဲ့ သူ့ဆံပင်တွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ဖီးထားပြီး လားလား ဘသားချောက သူတစ်ခါမှ မထိုင်တဲ့ ကျမယောက်ျား အမြဲထိုင်နေကျ ပက်လက်ကုလားထိုင်မှာ အခန့်သား ထိုင်နေပါတယ်။
ကျမကပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ မောင်တိုးက ကျမကို လှည့်ကြည့်ပြီးဘာမှ မပြောပဲ ခေါင်းတစ်ချက် ဆတ်ပြကာ ထိုင်ရာမှ ထလိုက်ပါတယ်။
သူ့ပုံစံ သူ့အမူအရာတွေကို ကြည့်ပြီး ကျွဲမြီးတိုရမယ့်အစား ကျမစိတ်ထဲမှာ သဘောကျ နှစ်သက်နေမိပါတော့တယ်ရှင်။
ကျမနဲ့မောင်တိုးဟာ တစ်စားပွဲထဲမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး ထမင်းစားကြတဲ့အခါကျတော့ ကျမတို့နှစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့် အတွေးနဲ့ ကိုယ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားမပြောဖြစ်ကြပါဘူး။ လင်ရလို့ ပထမဦးဆုံးညားတဲ့ညမှာ ထမင်းအတူစားရတဲ့ခံစားမှုမျိုးနဲ့ ကျမရဲ့ ရင်မှာ ကြည်နူးနေရပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း ကျမအပင်ပန်းခံပြီး ချက်ထားတဲ့ ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကို အားပါးတရစားနေတဲ့ သူ့ကို ကျမက တိတ်တခိုးလေး မျက်လွှာလေးပင့်ကာ ပင့်ကာကြည့်ရင်း ကျမရဲ့ရင်ထဲမှာ ကျေနပ်နေရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ထမင်းစားနေရင်းက ခဏကြာတဲ့အခါမှာ သူက ထမင်းစားပြီးသွားကာ လက်ဆေးဖို့အတွက် ထသွားပါတယ်။ သူစားတဲ့ပန်း ကန်ကိုတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ထမင်းစားပွဲပေါ်မှာ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကျမစားပြီးတော့မှ တစ်ခါထဲ ကျမက ပန်းကန်တွေကို စုပြီးဆေးလိုက်ပါ တယ်။ ခါတိုင်းဆို ဒီကိစ္စ ဒီအလုပ်က မောင်တိုးလုပ်နေကျတွေပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမကတော့ ကျေနပ်ပါတယ်လေ။ ပန်းကန်တွေဆေးပြီး ကျမအိမ်ရှေ့ကို ထွက်လာတော့ မောင်တိုးက အိမ်ရှေ့တံခါးတွေနဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေကို ပိတ်ပြီးနှင့်နေပါပြီ။ ခါတိုင်းလည်း ကျမ ယောက်ျား အိမ်မှာ မရှိရင် ဒီလိုပဲ ကျမနဲ့ မောင်တိုးတို့ အိမ်မှာ အတူကျန်နေခဲ့ကြဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ကျမတို့ကို ထူးဆန်းမ နေပါဘူး။ နောက်ပြီး ကျမတို့နေတဲ့ နှစ်ဆောင်ပြိုင်အိမ်ကြီးကလည်း တစ်ဧကနီးပါးရှိတဲ့ ခြံထဲမှာ ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး အိမ်ပတ်လည် ခြံထဲမှာလည်း သစ်ပင်တွေနဲ့ အုံ့ဆိုင်းနေတာဆိုတော့ ကျမတို့ပိုပြီး လွတ်လပ်ကြတာပေါ့။
အိမ်ရှေ့ရောက်လို့ ကျမက ကြည့်လိုက်တော့ မောင်တိုးဟာ စောစောကလို ပက်လက်ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်မနေဘဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေတာ တွေ့ရတာကြောင့် ကျမလည်း သူ့အနားမှာဝင်ပြီး ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ ကျမ ထိုင်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ မောင်တိုးဟာ ကျမ ရဲ့ ဘေးကို တဖြေးဖြေးတိုးကပ်လာ၍ သူ့လက်က ကျမကို သိမ်းကြုံးဖက်ကာ ကျမရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို သူ့ရဲ့ပေါင်ပေါ်လှဲချလိုက်ပါတယ်။ ကျမလည်း အလိုက်သင့်ပါသွားပြီး ပက်လက်လှန်ကာ သူ့မျက်နှာမော့ကြည့်နေတုန်း ကျမ မျက်နှာပေါ်ကို သူ့မျက်နှာက ငုံ့ပြီးလာရာက သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းကြီးတွေဟာ ကျမရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးပေါ်ဖိကပ်ပြီး စုပ်နမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။
ကျမလည်း သူ့လည်ပင်းကိုဆွဲခိုပြီး ကျမရဲ့မျက်နှာလေးကို မြှောက်တင်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီလို နှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်နမ်းရင်း စုပ်နမ်းနေတုန်းမှာ သူ့လက်ကြီးဟာ အငြိမ်မနေပါဘူး။ ကျမရဲ့ နို့အုံကြီးတွေကို အသာအယာပွတ်လိုက်။ တခါ တခါ တအားညှစ်ဆွဲလိုက် လုပ်နေပါတယ်။ နောက်တော့ ကျမရဲ့ အင်္ကျီထဲကို လက်ထိုးသွင်းပြီး နို့တွေကို နှိုက်လိုက် ဆွဲလိုက် လုပ်နေရတာ အားမရဘူးနဲ့ တူပါ တယ်။ ခဏနေတော့ ကျမရဲ့ အပေါ်အင်္ကျီက ကြယ်သီးလေးတွေကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံးလျှောက်ပြီး ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ကြယ်သီး တွေ အားလုံး ဖြုတ်ပြီးတဲ့နောက် ကျမရဲ့အင်္ကျီကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး တခါအတွင်းခံ ဘော်လီ အင်္ကျီဘေးက ဇစ်ကိုပါ ဆွဲဖြုတ်လိုက်ပြီး ကျမ ရဲ့ ဘော်လီအင်္ကျီလေးကိုပါ သူက ချွတ်ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။
ကျမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အထက်ပိုင်း တစ်ခုလုံးဟာ ကိုယ်လုံးတီးလေးဖြစ်သွားပြီး ဖြူဝင်း၍ ဖောင်းတင်းနေသော ကျမရဲ့ နို့အုံကြီးနှစ်လုံး ဟာလည်း လှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ့ ထွက်ပေါ်လာရပါတော့တယ်။ ဒီအခါမှာတော့ သူ့လက်ကြီးက ကျမရဲ့နို့ကြီးနှစ်လုံးကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ဘယ်ပြန်ညာပြန် စုန်ဆန်ကာ ကိုင်ရင်းနဲ့ နို့အုံကြီးတွေကို အရသာခံကာ ညှစ်လိုက် နယ်လိုက်လုပ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျမရဲ့နို့သီးလေး တွေကို လက်ချောင်းလေးနှစ်ချောင်းကြားမှာ ညှပ်၍ လှည့်လိုက်တဲ့အခါများဆိုရင် ကျမဟာ စအိုဝလေးကိုပါ ရှုံ့ပြီးသွင်းလိုက်မိတဲ့အထိပါ ပဲ။
မကြာမီမှာပဲ သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေက ကျမရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်နေရာမှ လွှတ်ပေးလိုက်ကာ သူ့မျက်နှာကြီးက ပို၍ငုံ့ကျလာရာမှ ကျမ ရဲ့နို့သီးလေးနှစ်ဖက်ကို တစ်ဖက်ပြီး တစ်ဖက် ကုန်းစုပ်နေပါတော့တယ်။ မောင်တိုးဟာ တခါတခါမှာ ကျမရဲ့နို့အုံကြီး တစ်ခုလုံးကို ငုံခဲကာ မနာအောင်တွက်ဆပြီး သူ့ရဲ့သွားတွေနဲ့ တဇတ်ဇတ်လိုက်လိုက်ကိုက်တဲ့အခါ ကျမဟာ သူ့ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်လိုက်ပြီး ကျမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးဟာ ကြွရွပြီး ကော့တက်လာရပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ အသက်ရှုသံတွေ ပြင်းပြင်းပြီးလာရတဲ့ မောင်တိုးဟာ ကောက်ခါငင်ကာ ကျမရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကို စွေ့ကနဲပွေ့ချီလိုက်ပြီး အိပ်ခန်းထဲသို့ ခေါ်သွားတော့ရာ ကျမလည်း မျက်လုံး လေးတွေ မှိတ်ပြီး ရင်ထဲမှာကြည်နူးမှုလေးတွေ တသိမ့်သိမ့်နဲ့ သူခေါ်ရာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားရပါတော့တယ်။
အိပ်ခန်းထဲရောက်တော့ မောင်တိုးဟာ ကျမရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကို ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်ချလိုက်ပါတယ်။ နောက် ကျမရဲ့လက် နှစ်ဖက်ကို ခေါင်းရင်းဖက်သို့ လှန်၍ချပေးလိုက်ပြီး သူကတော့ ကုတင်စွန်းမှာ တင်ပါးလွဲဝင်ပြီး ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုထိုင်နေရာကနေ သူက ကျမရဲ့နို့အုံကြီးတစ်ဖက်ကို ကုန်း၍ စို့လိုက်ရာက သူ့လက်တဘက်က ကျမရဲ့ကျန်တဲ့နို့အုံတစ်ဖက်က နို့သီးလေးကို လှိမ့်ပြီးချေနေ ပါတယ်။
သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျမရဲ့အောက်ပိုင်းမှာ ဝတ်ထားတဲ့ ထဘီကိုဖြေလိုက်ပြီး အောက်သို့ဆွဲချကာ ကျမရဲ့အဖုတ်လေးကို ပယ်ပယ် နယ်နယ် ပွတ်ချေလိုက်၊ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ဖက်ကို နှိုက်ပွတ်လိုက်၊ စောက်ဖုတ်ကြီးတစ်ခုလုံး အုံကြွပါလာအောင် ဆုပ်ဆွဲလိုက်နဲ့ လုပ်ချင်သလို လုပ်နေတာပါပဲ။ သူလုပ်သမျှဟာလည်း ကျမအဖို့ ကောင်းဖို့ကြီးပဲ ဖြစ်နေတာပါပဲရှင်။ သူ့ရဲ့လက်က ကျမရဲ့စောက်စေ့ လေးကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါများဆိုရင် ကျမဖြင့် ဖင်ကြီးတွေကို အိပ်ယာပေါ်ကနေ ကော့မြှောက်တက်သွားရတဲ့အထိပါပဲ။ ဒီကြားထဲ မောင်တိုးဟာ ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းပေါက်ကိုပါ ချမ်းသာမပေးဘဲ သူ့လက်ခလယ်နဲ့ စောက်ခေါင်းထဲကို အဆုံးထိ ထိုးထည့်ကာ နှိုက်နေတော့တာပါပဲ။ တစ်ခါ တစ်ခါ ချာလပတ်လှည့်နေလိုက်သေးတယ်။ အဲ….သူ့လက်ခလယ် ပြန်နှုတ်လာတဲ့အခါ တစ်ခါထဲ ဆွဲနှုတ် တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တဖြေးဖြေးပွတ်လာပြီး ကျမရဲ့ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ဖက်ရဲ့ အတွင်းဂလိုင်ထဲကို လှည့်ပတ်ပွတ်နေပါသေးတယ်။ နောက်ပြီးမှ ကျမရဲ့ အစေ့လေးအပေါ်ကို တဖြေးဖြေးတိုက်ဆွဲလာတယ်ရှင့်။
အို….အဲဒီအချိန်မှာဖြင့် ကျမရဲ့ဖင်ကြီး တစ်ခုလုံးဟာ ကော့လန်ပြီး ခြေထောက်(၂)ချောင်းဟာလည်း အငြိမ်မနေနိုင်တော့ဘဲ ကား လိုက် စုလိုက် ဆန့်လိုက် ကွေးလိုက်ဖြင့် မနေတတ် မထိုင်တတ်နဲ့ ကျမဟာဖြင့် ဆပ်စလူးကို ခါနေရတော့တာပါပဲရှင်။ တစ်သက်နဲ့တ ကိုယ် ကျမယောက်ျားဖြင့် တစ်ခါမှ ကျမကို ဒီလိုကြင်ကြင်နာနာနဲ့ လုပ်မပေးဖူးပါဘူးရှင်။ သူလုပ်တဲ့အခါမှာဖြင့် ကျမကပင် သူ့လီးကို ကိုင် ပြီး အပေါက်ဝတေ့ပေးရသေးတယ်။ အဲဒီလိုတေ့ပေးလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် သူ့လီးကိုသာ မဝင်ဝင်အောင် အဆုံးထိ ဇွတ်တရွတ်သွင်းပြီး အခါနှစ်ဆယ် သုံးဆယ်လောက် ညောင့်ပြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ ပြီးသွားတာပါပဲ။
ကျမလည်း ပထမတော့ ယောက်ျားတွေဟာ အားလုံး ဒီလိုချည်းနေမှာပဲလို့ ထင်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလောက်ကြာကြာလည်း တခါမှ မခံရ ဖူးပါဘူး။ တို့လို့တန်းလန်းနဲ့ ပြီးသွားပြီး သူကတော့ တခေါခေါနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတာပါပဲ။ ကျမမှာသာ မျက်စေ့ကြောင်၍ တစ်ညလုံး အိပ်မ ပျော်တဲ့အခါများပါတယ်။ ကျမယောက်ျားဟာ လူကောင်ကတော့ ကြီးပါတယ်။ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့ဟာက မောင်တိုးတဝက်စာလောက်ပဲ ရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျမက လူကြီးရင် လီးလည်းကြီးလိမ့်မယ် ထင်နေတာ တကယ်တော့ မဟုတ်ဘူး ရှင်။ အခုအချိန်မှာ မောင်တိုးဟာ ကျမ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ရွတက်နေတာကိုသိလို့ သူ့မှာရှိတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်နေပါတယ်။ အား လုံးကျွတ်ကုန်လို့ သူ့လီးကြီးပေါ်လာတဲ့အခါ ကျမက အိပ်ယာပေါ်ကနေ ကြုံးထပြီး သူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲကာ သူ့ကို ကျမ ဘေးနားမှာ လှဲ ချလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ကျမဟာ သူ့ကို ပက်လက်လှန်ပြီး ကဗျာကသီထထိုင်ကာ သူ့လီးကြီးကို သေသေချာချာ ကျမ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဆုတ်ကိုင်ပြီး ကြည့်နေမိပါတယ်။ မာတောင်နေတဲ့ သူ့လီးကြီးရဲ့ လုံးပတ်ကို ကျမရဲ့ လက်မနဲ့လက်ခလယ်ကို ကွင်းလုပ်ပြီး စွပ်ကြည့် တော့ အတော်ပဲရှင့်။ ကဲ….ဘယ်လောက်များကြီးသလဲ။ နောက်ပြီး အရှည်ကျပြန်တော့လည်း ကျမရဲ့လက်ဖဝါးကို ကားပြီး လက်မထိပ်နဲ့ လက်သန်းထိပ်တို့နဲ့ထွာကြည့်တာ သူ့လီးကြီးက လက်တစ်လုံးလောက်တောင် ပိုရှည်ပါသေးတယ်။ အားရစရာကြီးပေါ့ရှင်။ အဲ….နောက် ပြီး ကျမယောက်ျားရဲ့လီးလို တစ်ခါထဲ ဒစ်ကြီးပေါ်နေတာမဟုတ်ဘဲ သူ့လီးကြီးက ဖြဲချလိုက်မှ ပေါ်တာရှင့်။
သူ့အမွှေးတွေကို ရိပ်ထားတာ မကြာသေးဘူးနဲ့တူပါတယ်။ ဆီးစပ်ကို ပွတ်ကြည့်တော့ အမွှေးငုတ်တိုတွေက ယားတားတားနဲ့ မောင် တိုး လီးကြီးက ခံရတဲ့အခါသာ ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးရှင့်။ အခုလို ကိုင်ကြည့်တော့လည်း ကိုင်ရတာ နွေးတေးတေးနဲ့ အရသာတမျိုးပါပဲ။ အဲဒီလို ကျမက သူ့လီးကြီးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်နေတဲ့အခါမှာ မောင်တိုးဟာ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာပုံရပါတယ်။ ကျမလက်နဲ့ ဆုတ်ထားတဲ့ကြားကနေပြီး သူ့လီးကြီးဟာ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တောင်နေပါတယ်။ သူ့ရဲ့လီးတန်ကြီးအောက်က အုကြီးဟာလည်း မဲ နက်လုံးတစ်ပြီးနေကာ ကျမရဲ့လက်သီးဆုပ်လောက်ရှိပြီး ဖောင်းတစ်နေပါတယ်။
သူ့အုကြီးကို ကြည့်မိရာက အသဲယားလာတဲ့ကျမဟာ အုကြီးကိုကိုင်မယ်လုပ်ကာရှိသေးတယ်။ သူက ကျမကို ဆွဲလှဲလိုက်တော့ အ လိုက်သင့်လှဲပြီး ပက်လက်လှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာတော့ သူဟာ ထထိုင်ပြီး ကျမရဲ့ခေါင်းရင်းကိုလာကာ ဒူးနှစ်လုံးကို ကျမရဲ့ ပုခုံးနှစ်ဖက်အထက်နားမှာထောက်၍ ကုန်းချလိုက်တော့ သူ့လီးကြီးဟာ ကျမရဲ့မျက်နှာပေါ်ဝဲနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျမဟာ စုပ် ကြည့်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာပြီး ကျမလက်တစ်ဖက်နဲ့ သူ့လီးကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး ပါးစပ်ထဲကို ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ ကျန်လက်တစ်ဖက် က သူ့အုကြီးကို အသာအယာပွတ်ပေးနေမိပါတယ်။ ကျမရဲ့ လျှာကလည်း ပါးစပ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ သူ့လီးကြီးကို လျှာထိပ်နဲ့ တို့တို့ပြီး တပြွတ်ပြွတ်စုပ်နေလိုက်ပါတော့တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ မောင်တိုးဟာ ကျမကို ကလဲ့စားချေသည့်အလား ကျမရဲ့ထောင်နေတဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကို ဘေးသို့ဖြဲကားလိုက်ပြီး ကျမရဲ့ တင်ပါးနှစ်ဖက်အောက်လက်ကို လျှိုနှိုက်ကာ ဆုပ်နယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျမရဲ့ အဖုတ်ဟာ အလိုလိုနှစ်ခြမ်းကွဲ၍ ပြဲကားသွားရပါ တော့တယ်။ အဲဒါကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ မောင်တိုးရဲ့မျက်နှာဟာ ကျမရဲ့ဖြဲကားနေတဲ့ အဖုတ်ပေါ်ကိုရောက်လာပြီး သူ့နှာခေါင်းနဲ့ ကလိ ကာ တရှုံ့ရှုံ့လှိမ့်နမ်းနေပါတယ်။ နောက်တော့ မောင်တိုးဟာ ကျမအပေါ်မှာ ကုန်းနေတဲ့အနေအထားကနေ ဘေးသို့စောင်းပြီး ပက်လက် လှဲချလိုက်ပါတယ်။ သူ ပက်လက်လှန်လိုက်တဲ့အနေအထားအတိုင်း ကျမကလည်း အလိုက်သင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို လှိမ့်လိုက်တဲ့အတွက် မောင်တိုးက ပက်လက်လှန်ရက်အနေအထားဖြစ်ပြီး ကျမက မောင်တိုးအပေါ်မှာ ကုန်းရက်အနေအထားဖြစ်သွားပါတယ်။ အခုဆို ကျမနဲ့ မောင်တိုးဟာ ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်နဲ့ 69 အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။
ကျမဟာ လက်တစ်ဖက်နဲ့ သူ့လီးကြီးပေါ်က အရေပြားကို ဖြဲချလိုက်ပြီး ဒစ်ကြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ ကျမရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ငုံစုပ် လိုက်ပါတယ်။ သူ့လီးကြီးဒစ်ကြီးအောက်ခြေတဝိုက်ကို ကျမလျှာဖြားလေးနဲ့ ပတ်လည်လှည့်ပြီး ယက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မောင်တိုး ရဲ့ ခါးကော့တက်လာပြီး သူ့လီးကြီးဟာလည်း ကျမပါးစပ်ထဲကို တိုးဝင်လာပါတယ်။ လီးကြီးကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ ထိန်းကိုင်ထားပြီး အ ထက်အောင်စုန်ဆန် အသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်း အားနဲ့စုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့….
“ အား…..ဟား….ကောင်းလိုက်တာ မမရယ်…..အ….အ….အား….”
ဆိုပြီး မောင်တိုးရဲ့ မချိမဆန့် အော်လိုက်တဲ့အသံကို ကြားရပါတယ်။ ကျမက သူ့လီးကြီးကို ငုံစုပ်ပေးနေသလို မောင်တိုးဟာ ရပ်မနေ ပါဘူးရှင်။ စောစောက ကျမစောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား အပေါ်ယံကိုသာ နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုံ့နေတဲ့ မောင်တိုးဟာ အခုဆိုရင် ကျမစောက်ဖုတ် ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ သေချာဖြဲပြီး သူ့ရဲ့လျှာကြီးကို ကျမစောက်ခေါင်းထဲ ထိုးထည့်ပြီး ယက်ပေးပါတယ်။ ကျမဟာ ယားယားနဲ့ သူ့မျက်နှာ ပေါ်ကို စောက်ဖုတ်နဲ့ ဖိဖိပြီး ပွတ်ပေးလိုက်တာ သူ့ပါးစပ်တစ်ခုလုံး စောက်ရည်တွေ ပေကျံကုန်မှာပါပဲ။ ကျမဟာ သူ့ရဲ့လီးကြီးကို အာ ခေါင်အားနဲ့ ပါးပြင်နှစ်ဖက်ချိုင့်ခွက်နေအောင် အားယူပြီး အားနဲ့စုပ်စုပ်ပြီး လျှာနဲ့လည်း ယက်ပေးနေမိပါတယ်။ မောင်တိုးဟာ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့ သူ့မျက်နှာပေါ်ဖိကပ်ထားတာကိုတောင် မောင်တိုးရဲ့လက်နှစ်ဖက်က ကျမရဲ့ရမ်းခါနေတဲ့ ဖင်ကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်ပေး ရင်း ကျမရဲ့ စောက်ခေါင်းအတွင်းသားနံရံတွေကို သူ့လျှာကြီးနဲ့ ပွတ်ပွတ်ပြီး ယက်ပေးနေပါတယ်။ တခါတခါမှာ ကျမ စောက်ဖုတ်အဝနဲ့ သူ့ပါးစပ်အဝ တေ့လိုက်ပြီး အားနဲ့ စုပ်ပေးလိုက်တဲ့ခါများဆိုရင် ကျမရဲ့အသည်းနှလုံးတွေပါ ပြုတ်ထွက်ကုန်မလားထင်ရလောက်အောင် ကို ကောင်းလှပါတယ်ရှင်။
“ ပြွတ်…..အင်း….အား…..ပြွတ်…..ပလွတ်….ပြွတ်……အား…..ကောင်းလိုက်တာ မောင်တိုးရယ်…..အား….စုပ်……အား…..ယက်စမ်းပါ…..အထဲထိ…..အား…..ဟား…..”
“ အား….မမ…..အ…..အား….ကောင်းလိုက်တာ မမရယ်…..အ….ဟား…..”
မောင်တိုးနဲ့ကျမဟာ အပြန်အလှန် အားရပါးရ စုပ်ပေးယက်ပေးလုပ်နေတာ ပြီးလုပြီးခင်ထိကို ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမက ဒီ အတိုင်း မပြီးလိုက်ချင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျမမှာ သူ့လျှာမမှီတဲ့
နေရာက သိပ်ယားနေပြီ။ ဒါကြောင့် သူ့လီးကြီးကို ကျမပါးစပ်ထဲကနေ ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့မျက်နှာပေါ်ခွထားတဲ့ ကျမရဲ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုလည်း ဖယ်လိုက်ပါတယ်။ ကျမ သူ့ကိုယ်ပေါ်က ဆင်း လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ မောင်တိုးဟာ ပက်လက်လှန်နေရာက ထထိုင်ပြီး ကျမကို အိပ်ယာပေါ်လှဲချလိုက်ပါတယ်။ ကျမက သူ့ကိုလက်တွေကို ဖယ်ပြီး သူ့ကိုပြန်တွန်းလှဲလိုက်တော့ သူက အိပ်ယာပေါ်ကို ပက်လက်လှန်ပြီး လဲသွားပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို ကျမက တက်ခွစီးလိုက်ပါတယ်။ သူကလည်း ပက်လက်ကနေ ကျမရဲ့ပေါင်သားနဲ့ ဖင်ကြီးတွေကို ဆုပ် နယ်ပေးစဉ်မှာ ကျမက သူ့လီးကြီးကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ပြီး ကျမစောက်ဖုတ်ထဲ မဝင် ဝင်အောင် သွင်းနေပါတယ်။ ကျမဟာ သူ့လီကြီး ကို ကျမ စောက်ပတ်ဝနဲ့ သေသေချာချာတေ့လိုက်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ တဗြစ်ဗြစ်နဲ့ ဝင်သွားပါတယ်။ အဆုံးထိဝင်သွား တာနဲ့ တပြိုင်နက်ထဲ ကျမက မလှုပ်ရှားသေးဘဲ ခဏစိမ်ထားလိုက်ပါတယ်။ သူ့လက်တွေကလည်း ကျမရဲ့ဖင်ကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်နေရာ ကနေ ကျမရဲ့နို့အုံကြီးနှစ်လုံးပေါ်ကို ရောက်လာပါတယ်။
သူက ကျမရဲ့နို့သီးနီနီရဲရဲလေးတွေကို သူ့လက်နှစ်ဖက်က လက်ညှိုးနှင့် လက်ခလယ်ကြားမှာ ညှပ်ပြီး သူ့လက်မတွေက ရွရွလေးပြိုင် တူ ချေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျမမှာ စိမ်ထားရုံနဲ့ အားမရတော့ပါဘူး။ ကျမက စပြီး ညောင့်လိုက်ပါတော့တယ်။
ကျမဟာ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်နဲ့ စပြီး လှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူ့လီးကြီအရင်းနဲ့ ကျမစောက်ပတ်ဝ ထိတဲ့အထိ ထိုင်ချလိုက်ပြီးတဲ့အခါ ကျမဟာ သူ့လီးကြီးဒစ်ဖျားအထိ ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဆွဲထုတ်ပြီးတဲ့အခါ ပြန်ပြီး အဆုံးထိထိုင်ချပေးလိုက်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ တစ်ချက်ခြင်း လိုးပေးနေပြီး တဖြေးဖြေးနဲ့ ကျမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ မြန်ဆန်လာရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဖြေးဖြေးချင်းညောင့်နေတာမဟုတ် တော့ပဲ အားရပါးရ ဆောင့် ဆောင့်ပြီး လိုးပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
“ ဗြစ်….ဗြစ်…..အား…..အောက်ကနေ ပြန်ဆောင့်ပေး မောင်လေး…….ဆောင့်…..ဆောင့်……အား…..ဟား…..အ….နို့တွေကို...ဆွဲ.....ဆွဲ....ပေးဦး....အ....ဟား....ဗြစ်....ပြွတ်...ပြတ်...
“ အား…..ဟား….ကျနော်လည်း ပြီးတော့မယ် မမ…..ဆောင့်….ဆောင့်…..ကောင်းလိုက်တာ မမရယ်…..အား….ဟ…..ပြီး..ပြီ….မမ. …..အား…..”
“ ဗြစ်…ဗြစ်…ပြွတ်….ဗြစ်…..အင်း…..ဟင်း….အား……ကောင်းလိုက်တာ…..အား……အမလေး….ထွက်….ထွက်ကုန်ပြီ မောင်လေး…ရယ်….အား…..ရှီး…..အား….ပြီး….ပြီး…..အ….ဟား…..”
မောင်တိုးက ကျမထက် အရင်ပြီးသွားပြီး မောင်တိုးရဲ့လီးကြီးထိပ်က သုတ်ရည်တွေဟာ ကျမရဲ့စောက်ပတ်ထဲကို တပြစ်ပြစ်နဲ့ ပန်း ဝင်လာပါတယ်။ ပြီးချင်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကျမဟာ အံကြိတ်ပြီး ဆက်ခါ ဆက်ခါ ဆောင့် ဆောင့်လိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်အ တွင်းသားတွေနဲ့ မောင်တိုးရဲ့လီးကြီး ညှစ်လိုက်ပြီး အီဆိမ့်နေအောင်ကောင်းလှတဲ့ ကာမအရသာကို အပြည့်အဝခံစားရကာ ကျမရဲ့ စောက်ရည်တွေကို ပန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျမရဲ့စောက်ရည်တွေဟာ ဒရဟောစီးဆင်းလာပြီး သူ့ဆီးစပ်တစ်ခုလုံး ရွှဲရွှဲစိုသွားတော့တာ ပါပဲ။ စောက်ရည်တွေ ပန်းထုတ်ပြီး ပြီးသွားတဲ့နောက် ကျမ စောက်ပတ်ထဲမှာ သူ့လီးကြီးတပ်ရက်တန်းလန်းနဲ့ သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို မှောက်ချ ပြီး မှိန်းနေလိုက်ပါတယ်။
ခဏလောက်အမောဖြေပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ကျမဟာ သူ့အပေါ်ကနေ ဆင်းပြီး သူ့ရဲ့ဘေးမှာ ပက်လက်လှဲချလိုက်ပါတယ်။ မောင်တိုး ဟာ ကျမရဲ့ပါးပြင်လေးကို အားပါးတရ နမ်းရှိုက်လိုက်ပြီး ကျမရဲ့နို့အုံကြီးတွေကို ဖြစ်ညှစ်ပြီး ကိုင်နေပါတယ်။ နောက်တော့ သူက ကျမကို ရွှန်းရွှန်းစားစားကြည့်ပြီး ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ ကျမရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ထိကပ်ပြီး နမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။ ကျမက လည်း အလိုက်သင့် သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြန်နမ်းမိပါတယ်။ မောင်တိုးရဲ့လျှာဟာ ကျမပါးစပ်ထဲရောက်လာပြီး ကျမရဲ့လျှာဖျားလေးကို သူ့ လျှာနဲ့ပွတ်သပ်ပြီး ကျမရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကို ဆွဲစုပ်ပြီး နမ်းပါတယ်။ ကျမဟာလည်း ကျမရဲ့လျှာနဲ့ သူ့လျှာကို ပြန်ပြီး ပွတ်သပ်ကာ နှုတ်ခမ်း ချင်း စုပ်ပေးရင်း ကျမရဲ့မျက်စိတွေကို မှိတ်ထားလိုက်ကာ သူ့ရဲ့အနမ်းမှာ နစ်မျောနေမိပါတယ်။ ခဏကြာတော့ မောင်တိုးဟာ နှုတ်ခမ်း ချင်း ခွာလိုက်ပြီး ကျမရဲ့နို့အုံကြီးတွေပေါ်ကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ မောင်တိုးဟာ ကျမရဲ့နို့အုံကြီးတွေကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ပြောင်းပြီး စို့ပေးနေပါတယ်။ ကျမရဲ့နို့အုံပေါ်ကိုလျှာဖျားလေးနဲ့ယက်ပေးပြီး နို့သီးတွေကို ငုံခဲကာ ပါးနှစ်ဖက်ချိုင့်ဝင်သွားအောင် ကို စုပ်ဆွဲပြီး စို့ပေးပါတယ်။
မောင်တိုးရဲ့ လက်တစ်ဖက်ကလည်း အငြိမ်မနေဘဲ ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်သပ်ပြီး ကလိနေပါတယ်။ ကျမရဲ့အရည်တွေ ရွှဲနစ် နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို သူ့လက်ခလယ်နဲ့ ထိုးနှိုက်ဆွနေရင်း လက်ညှိုးနှင့် လက်မကြားမှာ ကျမရဲ့စောက်စေ့လေးကို ညှပ်ပြီး ပွတ်ချေ ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျမဟာ မနေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာပြီး ကျမရဲ့ဖင်ကြီးတွေဟာ မွေ့ယာပေါ်ကနေ တစ်ထွာလောက် ကော့ တက်လာပါတယ်။ မောင်တိုးဟာ တစ်ချီပြီးသွားပေမယ့် အားရတင်းတိန်ခြင်းမရှိသေးပဲ နောက်တစ်ချီထပ်လုပ်ဖို့အတွက် အစပျိုးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမဟာ သူ့ရဲ့လုပ်ကိုင်ပေးတာတွေကို မှိန်းမောခံစားရင်း သူရဲ့လီးကြီးကို မျက်လုံးဖွင့်ပြီး ကြည့်လိုက်မိတဲ့အခါမှာတော့ မောင်တိုးဟာ စိတ်တွေတဖန်ပြန်ထလာပုံရပါတယ်။ သူရဲ့လီကြီးဟာ သံချောင်းတစ်ချောင်းလို မာတောင်ပြီး တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေကာ လီးထိပ်မှ အရည်ကြည်လေးတွေ စီးကျနေတာကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ မောင်တိုး ဆန္ဒတွေ ပြင်းပြလာရတာနဲ့အမျှ ကျမဟာလည်း သူ့ရဲ့ နူးနပ်မှုတွေအောက်မှာ နစ်မျောခံစားရင်း စိတ်တွေ တဖန်ပြန်ထလာပါတယ်။ ခဏအကြာမှာတော့ မောင်တိုးက
“ အရမ်းချစ်တယ် မမရယ်….မမကို ချစ်လို့ မဝသေးဘူး….”
“ မဝသေးရင် ချစ်ပေါ့….မချစ်ရဘူးလို့ ဘယ်သူကပြောနေလို့လဲ….”
“ မမရော ကျနော့်ကို ချစ်လားဟင်….”
“ သိပ်ချစ်တာပေါ့ မောင်လေးရယ်….မမကို ပစ်မသွားရဘူးနော်….ဒီလိုပဲ အမြဲတမ်းချစ်ရမယ် သိလား….”
“ မမ တစ်ယောက်ထဲမှာကိုပဲ ချစ်မှာ….မမကလွဲပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ ချစ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး….”
“ ဟုတ်ရဲ့လား….မောင်လေးရယ်….မမ မယုံရဲဘူး....”
“ တကယ်ပြောတာပါ မမရယ်…..မမကလွဲပြီး ဘယ်မိန်းမကိုမှ မချစ်ဘူး…..မမက ကျနော့်ရဲ့ အချစ်ဦးပါ….မမနဲ့ကျမှ အချစ်ဆိုတာကို ခံစားတတ်ခဲ့တာပါ….”
“ မောင်လေးက အပြောလည်း ကောင်းတယ်နော်….”
“ အပြောကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး…..လက်တွေ့ ချစ်ပြမှာပါ….”
“ ကျနော်တို့ ချစ်ကြရအောင်နော်….”
“ မမ….ကျနော့်ကို လေးဘက်ကုန်းပေးပါလား…”
မောင်တိုးဟာ ကျမကို လေးဘက်ထောက်ပြီး ဖင်ကုန်းခိုင်းလာပါတယ်။ ကျမလည်း သူ့ဆန္ဒအတိုင်း လိုက်လျောပြီး မွေ့ယာပေါ်မှာ လေးဘက်ထောက်ပြီး ခါးလေးကို ခွက်လိုက်ကာ ကျမရဲ့ဖင်ကြီးတွေကို မြှောက်ကြွပင့်တင်ပေးပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုလည်း ကားထားပေး လိုက်ပါတယ်။ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲနော်….ကျမက သူ့ကိုချစ်မိသွားတာကိုး သူ့ဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးရတော့မပေါ့။ ကျမ လေးဘက် ထောက်ပြီး ဖင်ကုန်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မောင်တိုးဟာ ကျမရဲ့ဆူဖြိုးကားစွင့်ပြီး အယ်နေတဲ့ ဖင်ကြီးတွေနောက်မှာ ဒူးထောက်နေ ရာယူရင်း ကျမရဲ့ရမ္မက်ကြွစရာ ထွားပြီး အယ်နေတဲ့ ဖင်ကြီးတွေကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေပါတယ်။ ကြည့်နေရင်း မောင်တိုးဟာ စိတ်တွေ မ ရိုးမရွဖြစ်လာပုံရပါတယ်။ မောင်တိုးဟာ ကျမရဲ့ဖင်ကြီးတွေဆီကို မျက်နှာအပ်ပြီး ကျမရဲ့ဖင်ကြီးတွေကို ကုန်းပြီး အားရပါးရ သူ့ရဲ့နှာခေါင်း နဲ့ထိုးပြီး နမ်းပါတော့တယ်။ မောင်တိုးက ကျမရဲ့ဖင်ကြီးတွေကို အားပါးတရနမ်းနေစဉ်မှာပဲ ကျမရဲ့စိတ်တွေဟာ ပိုထကြွလာပြီး စောက် ပတ်ထဲမှာလည်း ရွနေအောင်ယားလာတာကြောင့် ကျမရဲ့ဖင်ကြီးတွေဟာ လှုပ်ခါပြီးရမ်းလာပါတယ်။
“ မောင်တိုး….လုပ်တော့ကွာ….မမ မနေနိုင်တော့ဘူး….”
“ မမ….ဘယ်လိုဖြစ်နေလို့လဲဟင်….ကျနော်က ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ….”
“ တော်ပြီကွာ မမ မပြောချင်ဘူး….”
“ မမ…က ဘာမှမပြောရင် ကျနော်က ဘာလုပ်ရမှန်းသိမှာ မဟုတ်ဘူးလေ….ပြောမှသိမှာပေါ့….”
“ ကဲ….ဒီလောက်ကြားချင်နေရင်လည်း ပြောမယ်….မမ စောက်ပတ်ထဲမှာ ရွနေပြီ…..အရမ်းခံချင်နေပြီ မောင်ရယ်….မမကို လိုးပေး တော့နော်…..ဟုတ်ပြီလား…..”
“ ဟုတ်ပြီ မမရယ်….မမကို လိုးပေးတော့မယ်နော်….”
မောင်တိုးဟာ ပြောပြောဆိုဆို ကျမရဲ့ဖင်ကြီးတွေနောက်မှာ အကျအန ဒူးထောက်ပြီးနေရာယူလိုက်ပါတယ်။ မောင်တိုးက ကျမရဲ့ဖင် ကြီးတွေကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖျစ်ညစ်ဆုပ်နယ်လိုက်ရင်း ကျမရဲ့ပြူးထွက်နေတဲ့စောက်ဖုတ်အဝမှာ သူ့လီးကြီးကို တေ့လိုက်ပါတယ်။ အဲ ဒီနောက် မောင်တိုးဟာ သူ့လီးကြီးနဲ့ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် မညှာမတာပင် စပြီး ဆောင့်လိုးလိုက်ပါတော့တယ်။
ဆောင့်လိုးလိုက်တဲ့အရှိန်ကြောင့် သူ့လီးကြီးဟာ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲ အရှိန်ပြင်းစွာ ထိုးဝင်လာပြီး ကျမ စောက်ဖုတ်လေးမှာ အောင့် တက်သွားပြီး ကျမ တကိုယ်လုံး ကော့တက်သွားရပါတယ်။ မောင်တိုးဟာ ကျမရဲ့နို့အုံကြီးနှစ်လုံးကို ဆွဲကိုင်ပြီး အားယူကာ လွတ်လွတ် လပ်လပ်ပင်ဆောင့်၍ လိုးနေပါတော့တယ်။
သူ့ရဲ့ဆီးစပ်က အုကြီးတွေနဲ့ ကျမရဲ့စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား ထိရိုက်သံတွေဟာ တရစပ်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ မောင်တိုးက အားပြင်းပြင်းနဲ့ ကျမ ကို ဆောင့်လိုးနေသလို ကျမကလည်း အားကျမခံ ကျမရဲ့ဖင်ကြီးတွေကို နောက်ပြန်ပစ်ပစ်ပြီး ဆောင့်ပေးနေမိပါ တယ်။ ကျမရဲ့ပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ဟာ မပြူးနိုင်တော့ပါဘူး။ ခွက်ပြီး ဝင်ဝင်သွားနေပါတယ်။ ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းထန်လှပါ တယ်။ တခါ တခါ ကျမရဲ့ဖင်ကြီးတွေကို နောက်ပြန်ပစ်အဆောင့်နဲ့ သူက ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်ကို အရှိန်နဲ့ဆောင့်အလိုး သွားဆုံတဲ့အခါမျိုး ဆိုရင် ကျမ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ရှေ့ကို ငိုက် ငိုက်ကျသွားရပါတယ်။ ကျမရဲ့ဖင်ကြီးတွေဟာ ရမ်းခါနေပြီး ကျမ မျက်လုံးတွေကို မှိတ်ထား လိုက်ကာ ခေါင်းကို နောက်လှန်ပြီး ကာမအရသာကို အပြည့်အဝခံစားနေမိပါတယ်။
သူက တတ်လည်းတတ်နိုင်လွန်းပါတယ်။ အချက်သုံးဆယ်လောက် တအားဆောင့်လိုးနေတာတောင် မပြီးသေးပါဘူး။ ကျမတောင် ပြီးချင်လာပါတယ်။ ပြောရင်းဆိုရင်း သူလည်း ပြီးခါနီးလာပြီထင်ပါတယ်။ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်နေပါပြီ။ ခပ်သွက်သွက်ဆိုတာ အဖျားဝင် သွားပြီး အရင်းက အုကြီးတွေပါ ဝင်သွားမတတ် ခပ်မြန်မြန်ဆောင့်ပြီး လိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခဏကြာလို့ သူ့လီးကြီးက သုတ်ရည်တွေ ပန်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲ ကျမက မပြီးသေးတဲ့အတွက် သူ့ကို ခပ်နာနာလေး ဆောင့်ပေးရန် မပွင့်တပွင့်နဲ့ ပြောလိုက်ရပါတယ်။
“ အား…..အ……အား…ပြီး…ပြီး….အ…..ဟား…..ဟင်း……မမ…..အား……ကောင်းလိုက်တာ မမရယ်……”
“ ဆောင့်….ဆောင့်…..မောင်လေး….မမ ပြီးတော့မယ်…..ဆောင့်ပေးဦး…..အား…..ဟား……”
သို့သော်လည်း မောင်တိုးမှာ သိပ်ပြီး မတတ်နိုင်တော့ပါ။ လုပ်ရုံသာ လုပ်ပေးနိုင်ပါတော့တယ်။ သူ့လီးတန်ကြီးကတော့ မာဆဲပါပဲ။ မောင်တိုးဟာ ပြီးသွားလို့ ဆောင့်အားလျှော့သွားတာနဲ့ ကျမဟာ ကုန်းပေးထားရာကနေ မောင်တိုးရဲ့ရှေ့မှ ထပြီး ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ ကျမဟာ သူ့ကို ပက်လက်ဆွဲလှဲချလိုက်ပြီး အမြန်ပဲ ကျမက သူ့အပေါ်ကို တက်ခွကာ သူ့လီးတန်ကြီးကို ကျမရဲ့စောက်ပတ် ထဲသွင်းပြီး ကျမဟာ ပြီးခါနီး ဆန္ဒတွေက အဆမတန်ပြင်းထန်နေလေတော့ ကျမရဲ့ဖင်သားကြီးတွေကို မြှောက်ကာ ချကာနဲ့ လုပ်ပြီး စိတ် ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း စိတ်ရှိလက်ရှိ အားရပါးရ ဆောင့် ဆောင့်ပြီး လိုးပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။
ဆောင့် ဆောင့် လိုးနေရင်း ပြီးခါနီးကော့တက်လာကာ လေးငါးချက် တအားပစ်ပစ်ဆောင့်လိုးအပြီးမှာတော့ ကျမရဲ့ တကိုယ်လုံးဟာ တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ တဟင်းဟင်းဖြစ်ရင်းက ကျမရဲ့စောက်ရည်တွေဟာ ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ ထွက်ကျကုန်ကြတာဟာ သူ့ဆီးခုံနဲ့ပေါင် ခြံတွေပေါ်မှာ ရွှဲကုန်တော့တာပါပဲရှင်။
အဲဒီညက ညသန်းခေါင်ကို အတော်လေး ကျော်သွားပြီးမှ ကျမတို့ ခြေကုန်လက်ပန်းကျကာ အိပ်ပျော်သွားရပါတယ်။ တွက်ကြည့် လိုက်တော့ ကျမဖြင့် (၈)ချီတောင် ပြည့်ပြည့်ဝဝပြီးခဲ့ရပါတယ်။ အားရကျေနပ်လိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့ရှင်…..။
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 10:52